Factory Factory - Mpanamboatra vokatra China, mpamatsy
Fitaovam-piadiana sy famonjena
Robot miady amin'ny afo
Fitaovana famonjena Hydraulika
Fitaovana famonjena afo
Fitaovana famonoana afo
Fitaovana polisy sy miaramila
Akanjo baomba EOD
Manodikodin-tsaina telodopika EOD
Akaiky ny fandavahana mangina
Radar amin'ny fanaraha-maso ny fiarovana
Detector explosive and narcotics
Jereo amin'ny radara amin'ny rindrina
Aroloha misy bala
Akanjo miaro bala
Fitaovana EOD napetraka
Fitaovana akustika lava
Miaro amin'ny fanairana ny polisy
Desktop Detector Liquid Mampidi-doza
Radar fitiliana UAV
Detector mivaingana methane laser
Detector gazy tokana
Fitaovana fiarovana ahy
Fitaovana famonjena rano
Detector mivaingana metana lavitra tarihin-tanana (JJB30)
Fiadiana amin'ny afo sy porofom-piadiana fiarovana amin'ny robot
RXR-M80D Robot Miady amin'ny afo
TS3 fiainana an-tany voafehy lavitra TS3
Robot fanaraha-maso lavitra an'ny ROV-48 mpamonjy rano
ROV2.0 Under Robot Robot
Detector YQ7 Multi-gazy
Fitaovana herinaratra hydraulic
Modely ： BJQ63 / 0.6 Fampiharana: BJQ63 / 0.6 Hydraulika Power Unit dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny famonjena lozam-pifamoivoizana, fanampiana ny loza voajanahary ary famonjena famonjena. Izy io dia loharanom-pahefana fitaovam-piadiana fidirana forcible hydraulic. Endri-javatra manan-danja: Fampiasana be ny famoahana tsindry dingana roa sy ambany, fiovam-po mandeha ho azy, avy eo manafainganana ny fotoana famonjena dia azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra. Izy io dia mampiasa menaka hydraulic hydraulic, ahafahany miasa eo ambanin'ny maripana -30 ℃ ka hatramin'ny 55. Afaka mampifandray fitaovana roa miaraka ...
Fitaovana mitambatra Hydraulika
Modely ： GYJK-36.8 ～ 42.7 / 20-3 Fampiharana GYJK-36.8 ～ 42.7 / 20-3 Hydraulika Combi-Tool Cutter-Spreader dia be mpampiasa eo amin'ny sehatry ny famonjena lozam-pifamoivoizana, fanamaivanana ny voina horohoron-tany, famonjena ny loza sns. Mety amin'ny asa famonjena finday io. Tapaho ny firafitry ny vy, ny singa ao anaty fiara, ny fantsom-by sy ny vy. Characteristic GYJK-36.8 ～ 42.7 / 20-3 Hydraulika Combi-Tool Cutter-Spreader dia mampiditra fehezam-bolo, fanitarana ary fanamafisana. Ity karazana fitaovana ity dia mitovy amin'ny clipper sy fanitarana ...
Tsorakazo tohana Hydraulika Ram / Hydraulika
Modely ： GYCD-130/750 Fampiharana: GYCD-130/750 Rod manohana hydraulic dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny làlambe sy ny lalamby, ny loza voajanahary sy ny famonjena ny morontsiraka, ny tranobe ary ny fanampiana ny voina. Endri-javatra manan-danja: Ny varingarina solika dia vita amin'ny alika mavesatra maivana. Fitaovana fanampiana: mitondra ny mandril dia mila kely ho an'ny legging, ary avy eo dia manafaingana ny fomba famonjena. Voaravaka tsara ny faran'ny nify antiskid, ka tsy ho solafaka amin'ny fihenjanana. Hidin-trano roa-hidin-trano hidina hidioka wi ...
Modely: GYJQ-25/125 Marika: TOPSKY Fampiharana: GYJQ-25/125 dia be mpampiasa amin'ny famonjena ny lozam-pifamoivoizana an-dalambe sy ny lalamby, loza noho ny horohoron-tany, trano nirodana, loza amin'ny rivotra, loza an-dranomasina sns. Fanapahana fanapahana: singa ao anaty fiara, firafitry ny vy, fantsom-pifandraisana, bara misy profil, takelaka vy sns. Toetra mampiavaka azy: vita amin'ny vy vy fitaovana fitsaboana hafanana avo lenta ny lelany. Ny etona no itsaboana azy. Ka manana fitafiana tsara. Ny faritra mihetsika dia misy casing miaro. Ny ...
Modely ： GYKZ-38.7 ～ 59.7 ／ 600 Fampiharana: GYKZ-38.7 ～ 59.7 ／ 600 Hydraulic Spreader dia be mpampiasa eo amin'ny sehatry ny famonjena ny lozam-pifamoivoizana, fanampiana traboina amin'ny horohoron-tany, famonjena ny lozam-pifamoivoizana sns. Izy io dia ampiasaina amin'ny fivezivezena sy fampiakarana sakana, famakiana ny triatra ary fanitarana enterclose. Izy io dia afaka manimba ny firafitry ny vy ary mamiravira ny takelaka vy eo ambonin'ny fiara. Izy io dia miara-miasa amin'ny zipper ary manala ireo sakana amin'ny arabe. Toetra mampiavaka: Halaviran'ny fanitarana: 600mm Elaelaina kely mandritra ny ope ...
Manual pump Model BS-63 / 0.07
Loharanon-kery fanohanana azo antoka ho an'ny andian-tsarimihetsika hydraulic single interface. Tsy ilaina ny solika na herinaratra, ny fiasan'ny tanana dia mety hiteraka herin'ny hydraulic, ary ny atiny tonga lafatra dia afaka mifamadika malalaka eo anelanelan'ny tsindry avo sy ambany hanatsarana ny fahombiazan'ny famonjena. 1. Famolavolana interface tokana, afaka miasa amin'ny tsindry, dingana iray. 2, 360 degre fihodinana snap interface tsara, fandidiana mety sy azo antoka kokoa. Parameter naoty miasa: 63MPa fantson-tsolika Hydraulika: ≧ 2.0L Low Voltag ...
Rano fanamafisam-peo mahery mavesatra Model GYCD-120 / 450-750
Endri-javatra ny ram dia azo ampiasaina ho an'ny fanohanana, traction ary asa hafa ao amin'ny toerana famonjena. Ho fanampin'izay, namboarina ny firafitry ny vokatra, ary nitombo ny halaviran'ny fanohanana sy ny lalan-dra. Fiakarana famonjena. 1. Volavola tokana-fantsom-pifandraisana tokana misy fantsona roa, izay azo ampiasaina amin'ny tsindry amin'ny dingana iray. 2. Ny interface dia buckle mihodina 360 degre, izay mety kokoa ary azo antoka kokoa ny miasa. 3. Fanaraha-maso tsy misy slip ho an'ny asa marina kokoa. 4. Mankany amin'ny lalana roa ...
Cutter hydraulic mavesatra Model GYJQ-28/125
Ny endri-javatra Ny fanapahana dia azo ampiasaina amin'ny fiasa toy ny fanapahana sy fisarahana amin'ny toerana famonjena. Ho fanampin'izay, ny fitaovana sisiny dia nohavaozina mba hanatsarana ny famirapiratry ny sisiny. Fisondrotana antsy amin'ny sisin'ny antsy, azo antoka kokoa mandritra ny fampiasana. 1. Volavola tokana-fantsom-pifandraisana tokana misy fantsona roa, izay azo ampiasaina amin'ny tsindry amin'ny dingana iray. 2. Ny interface dia buckle mihodina 360 degre, izay mety kokoa ary azo antoka kokoa ny miasa. 3. Fanaraha-maso tsy misy slip ho an'ny fandidiana marina kokoa 4. Izy io dia mandray lokanga roa ...
Mpanapaka sy fanaparitaka hydraulic mavesatra: GYJK-25-40 / 28-10
Endri-javatra Ny fitaovana mitambatra dia azo ampiasaina amin'ny fanitarana, fanety, fametahana sy asa hafa ao amin'ny toerana famonjena. Ho fanampin'izany, ny fitaovana antsy amin'ny sisin'ny antsy dia nohavaozina mba hanatsarana ny fanoherana ny fanorotoroana sy ny gloss antsy. Fisondrotana antsy amin'ny sisin'ny antsy, azo antoka kokoa mandritra ny fampiasana. 1. Volavola tokana-fantsom-pifandraisana tokana misy fantsona roa, izay azo ampiasaina amin'ny tsindry amin'ny dingana iray. 2. Ny interface dia buckle mihodina 360 degre, izay mety kokoa ary azo antoka kokoa ny miasa. 3. Fanaraha-maso tsy misy slip ho an'ny bebe kokoa ...
Paompy maotera mahery vaika BJQ-63 / 0.4S
Ny famafazana ny spreader dia azo ampiasaina amin'ny fanitarana, fikafika, fandraofana, fanenjehana ary asa hafa ao amin'ny toerana famonjena. Ho fanampin'izany, nohavaozina ny fitaovana valanoranony mba hanatsarana ny fahaizan'ny anti-extrusion, hanatsara ny firafitry ny vokatra ary hampitombo ny halaviran'ny fanokafana. 1. Volavola tokana-fantsom-pifandraisana tokana misy fantsona roa, izay azo ampiasaina amin'ny tsindry amin'ny dingana iray. 2. Ny interface dia buckle mihodina 360 degre, izay mety kokoa ary azo antoka kokoa ny miasa. 3. Switch non-slip ...
Endri-javatra nampidirina motera lasantsy Honda, mahery ny herinaratra ary milamina ny fahombiazany. 1. Rafitra famoahana indroa, afaka mampifandray fitaovana roa hampiasana amin'ny fotoana iray. 2, famolavolana interface tokana, azo ampiasaina amin'ny tsindry, amin'ny dingana iray. 3, 360 degre fihodinana snap interface, fandidiana mety sy azo antoka kokoa. 4. Ny fahombiazan'ny fanaparitahana hafanana tsara dia mahatonga ny ora fiasana tsy voafetra. 5. Ny haavon'ny tabataba ambany dia manampy ny kalitaon'ny fiantsoana eo amin'ireo mpamonjy voina sy ireo olona voafandrika. 6. Mavesatra maivana sy habe kely ...
Tsorakazo fanitarana plug haingana
1, ny refy mahazatra dia 125/150 / 200mm telo.
2. Fampidirana karazana buckle haingana. "1 segondra" hamita ny tsipika fanitarana sy ny tsorakazo tehina piston ary esory ny fifandraisana.
3, famolavolana anti-skid knurling, fanamafisana ny fikikisana sy ny fikorontanana, mora ampiasaina tsy misy mikorisa.
123456 Manaraka> >> Pejy 1/15
Ny birao nasionaly miaro ny ala sy ny ...
[Famoahana vokatra vaovao] Intellig Wireless ...
Nandray anjara tamin'ny fandefasana i Beijing topky ...
Famonoana afo vita amin'ny rivotra voafono de ...
Fanazavana amin'ny antsipiriany momba ny eq ...
10B NO.17 HuanKe làlana afovoany Jin Qiao Indostria Base Tongzhou Distrikan'i Beijing China 101102
Antsoy izahay izao: 0086 136 8301 5302